अतिक्रमित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पठाएर राजधानीको सडकमा सेना : श्रीमतीलाई अस्पताल राखेर ब्लड बैंक हिँडेका वृद्धलाई नांगै बनाइयो – HostKhabar ::
अतिक्रमित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पठाएर राजधानीको सडकमा सेना : श्रीमतीलाई अस्पताल राखेर ब्लड बैंक हिँडेका वृद्धलाई नांगै बनाइयो
सिडिओको अनुमतिविनै सडकमा सेना l यो एक समाचार मात्र होइन, एउटा निर्धो नागरिकलाई राज्यले कतिसम्म लखेट्न सक्छ भन्ने सबैभन्दा कुरुप उदाहरण हो । ६७ वर्षीय घनश्याम झालाई बन्दुकको बलमा सेनाले सडकमै नांगो बनायो । राज्यका फरकफरक निकायले १२ घन्टामा १२ ठाउँमा हुर्मत लिए ।
नयाँ पत्रिका/काठमाडौँ : आइतबार साँझको ४ बजे, कालिमाटी चोकको सुनसान सडकमा हतारहतार पाइला चाल्दै छन् घनश्याम झा । लकडाउन कार्यान्वयन गराउन भन्दै कालिमाटी चोकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, नेपाली सेना पनि खटिएको छ ।
अस्पतालको पत्र बोकेर श्रीमतीका लागि रगत लिन सडकमा छोरालाई हिँडाउँदै घनश्याम कालिमाटीको सोल्टीमोडस्थित ब्लडबैंकतर्फ जाँदै थिए । बाटोमै सैनिकले लुगा खोलिदिएपछि पनि उनी ब्लडबैंक पुगे । काउन्टरमा पैसा पनि तिरे । तर, ‘ब्लड’ बोक्ने आइसबक्स उनीसँग थिएन ।
अस्पतालले नै त्यस्तो बक्स दिएर पठाउनुपर्ने हो, तर न अस्पतालले दियो, न घनश्यामलाई थाहा थियो । घनश्यामले त ब्लडबैंकका कर्मचारीले भनेपछि मात्र त्यस्तो भाँडो चाहिन्छ भन्ने थाहा पाए ।
‘डाक्टरले तुरुन्तै रगत ल्याउनु भनेका छन्, जसरी पनि रगत दिनुपर्‍यो,’ पसिनाले निथ्रुक भिजेका घनश्यामले भनिरहेका थिए, ‘लौन हजुर त्यो भाँडो किन्न पाइन्छ भने म तुरुन्तै किन्छु ।’ तर, त्यो उपाय केही थिएन ।
घनश्याम त्यही बाटो कलंकीस्थित सहिद मेमोरियल अस्पतालतर्फ दौडिए । जहाँ उनलाई वीर अस्पतालले दिएका केही नमुना परीक्षण गराउनुपर्ने थियो । सहिद मेमोरियल अस्पताल पुगेर घनश्यामले परीक्षण गराउनुपर्ने नमुना छाडे ।
उनको बसाइ स्युचाटार हो, त्यसैले यही मौकामा लुगा लगाउन त्यतै लम्किए । तर, स्युचाटारको चोकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले उनलाई रोकेर सोधे– नांगै किन हिँडेको ? सडकमा हिँड्दा कपडा लगाउनु भनेर पनि उनले उर्दी दिए ।
बिहानैदेखि भोकै हिँडिरहेका घनश्यामले घर पुगेपछि एक गिलास पानी पिए । हल्का पसिना पुछेर आकासे निलो रङको सर्ट लगाए । छोरालाई घरमै राखेर उनी छिमेकीको घरमा छिरे ।
पाँच हजार रुपैयाँ सापटी मागेर उनी फेरि वीर अस्पतालतर्फ दौडिए । अताल्लिएका घनश्यामले दिनभर लगाएको मास्क घरमै बिर्सेछन् । चोकमा आइनपुग्दै प्रहरीले रोकेर फेरि भने– मास्क खोइ ? उनले गल्ती भयो भन्दै माफी मागे । अलिक पर मेडिकलमा किने ।
वीर अस्पताल फर्किंदै गर्दा अघि कालिमाटी चोकमा रहेको फोहोरको टोकरीमा घनश्यामले नजर पुर्‍याए । उनले अचानक सोधे, ‘अघि यहाँ फालेको लुगा कता गयो ?’
‘सेनाले लग्यो ।’ प्रहरीले झर्को मान्दै जवाफ दिए ।
घनश्याम वीर अस्पताल पुग्दा ८ बजिसकेको थियो । श्रीमती दिउँसो ३ बजेदेखि एक्लै थिइन् । आकस्मिक कक्षको ३० नम्बर बेडमा छटपटाइरहेकी उनी श्रीमान्लाई देखेपछि आशावादी भइन् । तर ‘ब्लड त ल्याएको छैन’ श्रीमान्को भनाइले श्रीमती फेरि झसंग भइन् ।
उता श्रीमती पनि प्रश्न गर्छिन्, ‘के भयो ? अघि अर्कै लुगा थियो, अहिले अर्कै ?’
उनले सैनिकले बाटोमा दुर्व्यवहार गरेको सुनाउन खोज्छन् । तर, अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै त्यस्तै रङकै लुगा लगाएको अर्को व्यक्ति देखेपछि घनश्याम आक्रोशित हुन्छन् । ‘लगाउन त अरूले पनि लगाएका छन् त, चोरेर लगाएको हो र ? पसलमा बेच्न दिने, लगाउन नदिने ?’ उनी भुनभुनाउँछन् । तर, उनको कुरामा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई छैन । विस्तृतमा सुनाउने फुर्सद स्वयं उनलाई पनि छैन ।
घनश्याम आएको देखेपछि स्वास्थ्यकर्मी आएर सोध्छन्, ‘रगत खोइ ?’ भाँडो नै नदिएको भनेर घनश्यामले गुनासो गर्छन् । उनले बाकस दिनोस्, म ब्लड लिएर आउँछु भनेर अनुरोध गरे ।
‘सात महिनाजति भयो अस्पतालले आइस बक्स नदिएको । लगेर हराउँछन्,’ ब्लडबैंकले नै आइस बक्स दिनुपर्ने हो,’ स्वास्थ्यकर्मीको जवाफ सुनेपछि घनश्याम रन्थनिए । दुई हातले थाप्लो समाउँदै उनी श्रीमतीलाई राखिएको बेडमा थचक्क बसे ।
तर, उनलाई त्यसरी बस्ने सुविधा कहाँ थियो र ? फेरि हारगुहार गर्न थाले । ब्लड बोक्ने बाकस न अस्पतालले दियो, न ब्लडबैंकले । हारगुहार गर्दै बाहिर निस्किएका उनी करिब मध्यरात वीर अस्पताल फर्किए । यसपालि श्रीमतीको अगाडि उभिँदा उनको हातमा आइस बक्स थियो, बक्सभित्र ब्लड । तर, श्रीमतीलाई सञ्चो बनाएर घर फर्किन्जेल उनलाई राज्यका कुन–कुन निकायले अझै हुर्मत लिने हुन्, जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
सिडिओको अनुमतिविनै सडकमा सेना
शान्तिसुरक्षासम्बन्धी काममा सेना ब्यारेकबाट निस्कन कि सुरक्षा परिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ कि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिनुपर्छ । अहिले सेनालाई सडकमा निकाल्न सुरक्षा परिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले पनि अनुमति दिएको छैन । तर, राजधानीको चोकचोकमा सेनाले जाँच सुरु गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्रको शासनकालपछि सेना सडकमा निस्किएर नागरिकका कागजपत्र जाँच गर्न थालेको यो पहिलोपटक हो । शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा नितान्त रूपमा नेपाल प्रहरीको हो । सडकमा कसैले नियम–कानुन तोडेको छ भने जाँच र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीको हो । तर, सुरक्षा परिषद् र जिल्ला प्रशासनको निर्णयविना सेना सडकमा देखिनु आश्चर्यजनक भएको छ ।
शान्ति–सुरक्षाको काममा सेना सडकमा आएकोमा प्रहरी पनि असन्तुष्ट छ । उता, सेनाले भने ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा चेकिङ गर्न थालेको बताएको छ । सेनाले आइतबार बानेश्वर, महाराजगन्ज, कालिमाटी र थापाथलीमा चेकजाँच गरेको छ ।